Krizin-tsakafo manerantany 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2019 14:57 GMT
Maro ny antony mahatonga izany. Fiovana foto-tsakafo avy amin'ny fitomboana ara-toekarenan'i Shina sy i India, faharatsian'ny andro, fiakaran'ny vidin-tsolika, fisongan'ny saram-pandefasana entana an-tsambo, ar ny setry ara-toekarena tamin'ny fanilihan'ny firenena manankarena ny voly tahaka ny katsaka mba hamokarana etona ethanol Ary mazava loatra, ny fidinan'ny sandan'ny dôlara amerikana izay mbola hanaovana fifanakalozana ara-barotra amin'ny ankamaroan'ny foto-tsakafo.
Vakio ny lahatsoratr'i John Liebhardt mitondra ny lohateny hoe fitetezana manerantany amin'ny krizin-tsakafo araka ny hita imason'ny bilaoera avoitra ato amin'ny Global Voices.
Fitantarana manokana: Tany Ejipta, ny fiakaran'ny vidin-tsakafo no olana lehibe amin'ny fitokonana faobe sy ireo fihetsiketsehana nandòna ny firenena tao anatin'ny herinandro maromaro. Jereo ny fitantaranay manokana momba izany, Fitokonana Faobe 2008 tao Ejipta.
Ao amin'ny YouTube, toddgsapp no nampiseho antsika lahatsary ny fanaovan‘ny fianakaviana iray ny mofomamy fotaka, tsy hohanindry zareo ihany, fa ho amidy ihany koa. Ny fangaro hanaovana ireny mofomamy na vatomamy fotaka maloto ireny dia loto, potipoti-javatra ary sira, ary indraindray ireny ihany no mba ivelomany. (Vakio bebe kokoa izany ato)
Zainab Bangura, Minisitry ny raharaham-bahiny avy ao Sierra Leone, mandefa hafatra amin'ny lahatsary ho an'ny olom-pirenena manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny tranonkalam-pikatrohana Avaaz.org mandrisika ny rehetra hanohana ny fanangonan-tsonia iray ho fanohanana ireo vahaolana amin'ny krizin-tsakafo manerantany.
Newsmerick iray avy amin'i Aparna Ray any India:
Ny sary etsy ambony dia vary ao amin'ny tsena mando iray ao Philippines tamin'ny taona 2007, avy amin'ny mpisera Flickr Hulagway.